Saturday April 14, 2018 - 11:09:32 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya xalay saqdii dhexe ay bilaawdeen duqeymo ba'an oo ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka dowladaha reergalbeedka kuwaas oo ka dhan ah Nidaamka Bishaar Al-asad.
Duqeymaha oo isugu jira kuwa ay geysanayaan diyaaradaha casriga ah ee dowladaha Faransiiska,ingiriiska iyo Mareykanka iyo sawaariikhda Kuruuzka loo yaqaan oo lagasoo tuurayo Maraakiib dagaal ayaa beegsanaya saldhigyo melleteri oo kuyaal gobollada Xammaah,Dimishiq, Laadiqiyah iyo Xalab oo dhammaantood Suuriya katirsan.
Goob Joogayaal ku sugan magaalada caasimadda ah ee Dimishiq ayaa sheegay in ay arkayeen diyaarado dagaal oo hawada soo buuxiyay waxaana la maqlay dhawaqa gantaallada cirka oo ciidamada Bishaar Al-asad ay la beegsanayeen diyaaradaha isbaheysiga si ay isaga caabiyaan.
Wakaaladda wararka ufaafisa Nidaamka Bishaar Al-asad ayaa xaqiijisay in qaar kamid ah sawaariikhda oo lagu weeraray Keydadka hubka ee magaalada Ximis ee Bartamaha Suuriya ay qabteen nidaamka sawaariikhda difaaca Ruushka balse qaraxyo xooggan ayaa ka dhashay duqeymo lala helay saldhigga loo yaqaan xarunta Buxuuthta ee duleedka Dimishiq halkaas oo loo malaynayo in uu ay ku suganyihiin maleeshiyaadka Ururka Xisbullaah isku magacaabay.
Wasiirka difaaca Mareykanka oo warbaahinta lahadlay ayaa sheegay in howlgalkan ka dhan ah hubka Kiimikada ah ay ku qaadeen Suuriya wuxuuna umahad celiyay dowaladaha kala qeyb qaadanaya duqeymaha .
Mareykanka iyo xulufadiisa waxay ku andacoonayaan in weerarkan uu jawaab celin u yahay xasuuq loo adeegsaday hubka Kiimikada oo Nidaamka Bishaar Al-asad uu isbuucii lasoo dhaafay ka fuliyay magaalada Dumay halkaas oo lagu dilay 200 qof oo ubadanaa Haween iyo Carruur.
Shir Jaraa'id oo si wada jir ay u qabteen James Mattis oo ah wasiirka difaaca Mareykanka iyo Gen. Joseph Dunford Taliyaha Guud ee Mareykanka ayay ku sheegeen in lasoo gaba gabeeyay wajiga koowaad ee weerarka ka dhanka ah Nidaamka Suuriya.
Wariyaal ku sugan dalka Suuriya ayaa sheegaya in duqeymuhu ay ahaayeen kuwa xadidan illaa iyo haddana lamasoo sheegin khasaara sidaas u ballaaran oo gaaray Nidaamka dabadhilifka Suuriya.
inkastoo Donald Trump uu isbuucii lasoo dhaafay sheegay in ay joojinayaan xasuuqa Nidaamka Al-asad uu ugeysanayo shacabkiisa hadane waxaa xusid mudan iyo dowladda Mareykanka iyo dowladaha isbaheysiga la ah ay dhankooda gummaad ka geysanayaan waqooyiga iyo Bariga Suuriya.